Hoggaamiyaha Kuuriyada Waqooyi oo xaaladiisa caafimaad laga deyrinayo - Awdinle Online
Hoggaamiyaha Kuuriyada Waqooyi oo xaaladiisa caafimaad laga deyrinayo
Waxaa soo baxaya warar kala duwan oo la xiriira xaalada caafimaad ee hoggaamiyaha Korea-da Waqooyi Kim Jong Un.
Taleefishinka dalka Maraykanka ee CNN ayaa baahiyay in ay heshay xogo sirdoon ah oo sheegaya in xaalada caafimaad ee Kim ay aad u liidato.
Kim ayaa la sheegay inuusan ka qeybgelin dabaal-degga sanad-guurada dhalashada awoowgiisa oo ku beegneyd 15-kii April, taasi oo dhalisay xan ku saabsan xaaladdiisa caafimaad. Waxaa kulan dowladeed lagu arkay afar maalin ka hor xilligaas.
Previous articleKhilaaf soo kala dhexgalay Puntland iyo Hir-Shabeelle.
Next articleDowladda Soomaaliya oo laga dalbaday dhowrista xoriyada hadalka.